Sintomy ny fandefasana Shuttle 06 (1) FS2004
Mivezivezy fanombohana 06 (1) FS2004 HOT
Toerana manodidina ny fandefasana ny sambon-danitra ao amin'ny Cape Canaveral. Koa ny 3 AI, dia ho eo amin'ny toerana manodidina. Sambo ihany koa tafiditra ao izany ny fandefasana entana eny pad. Azafady mariho fa ny mivezivezy eny maka raha vao ny FS2004 toerana manodidina startup. Eny indray izany taorian'ny 2 minitra. Rehefa afaka izany, tsy maintsy miandry 12 minitra mba hahita izany indray avy any amin'ny rivotra. Tsy maintsy avy eo na miandry minitra na akaiky 12 FS9 sy mifidy vaovao Cape Canaveral.
Fampitandremana: Tsy maintsy, indray mandeha nametraka, manambara ny toerana manodidina in FS2004. Ny installer Tsy mba hanao izany avy hatrany.
Mandehana any amin'ny toerana famakiam-boky Scenery> sokafy ny folder "Addon Scenery "> Mikaroha" Shuttle Launch 06 "tsindrio" OK "restart FS2004> toerana manodidina nametraka